मृत्युपछि तपाईँको फेसबुक के गर्ने? दुई वटा विकल्प आजै छान्नुस् :: PahiloPost
मृत्युपछि तपाईँको फेसबुक के गर्ने? दुई वटा विकल्प आजै छान्नुस्
स्वर्गीय पत्रकार कर्ण बोहोराको फेसबुक वाल चहार्ने हो भने उनको मृत्युको कुनै सङ्केत पनि पाइँदैन । बरु, वालमा उनले पोष्ट गरेका सुन्दर फोटो भेटिन्छन् । स्टाटस भेटिन्छन् । उनलाई ट्याग गरिएका फोटा र स्टाटसहरु पनि प्रशस्तै देखिन्छन्। उनको फेसबुक वालमा उनलाई ट्याग गरिएका प्रशस्तै स्टायटसहरु छन्। गायिका बिन्दु परियारले २३ डिसेम्बर २०१७ का दिन कर्णसहित ४४ जनालाई ट्याग गर्दै भनेकी छिन्— छोटो समयमा नै युट्युबमा पचास लाख जनाले हेरिदिनु भएको छ । धन्यवाद तथा धेरै धेरै बधाइ सम्पुर्ण टिमलाई । अनि यति धेरै माया गरिदिने श्रोता तथा दर्शकलाई जय मंगलम ।
कति जानकारी आफूले छानेको सर्कलका लागि र कति सार्वजनिक गर्ने? प्रयोगकर्ताले निर्धारण गरे अनुरुप पोस्ट देखाइन्छ। बाचुन्जेल र मृत्युपछि पनि। त्यसैले आजभोलि कसैको मृत्युको खबरसँगै उसको नाम फेसबुकमा खोजिइन्छ, ’उसको अन्तिम फेसबुक पोस्ट के थियो?’ भन्ने जिज्ञासासहित।
मृत्युपछि तपाईँको फेसबुक के गर्ने? दुई वटा विकल्प आजै छान्नुस् को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।